Liiska Hubinta ee Blogger-kaaga | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 22, 2020 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Douglas Karr
Shirkadaha SEO waxay sii wadaan isku dayga iyo maamulida natiijooyinka mashiinka raadinta… si fudud ma joogsan doonto. Matt Cutts oo ka tirsan Google ayaa qoray qoraal weyn, Burburinta iyo dhicitaanka blogging martigelinta ee SEO waxaa ka mid ah fiidiyoow ku saabsan istaaggiisa barta internetka ee martida iyo Matt oo tan u siinaya gunta
Kaliya waxaan rabaa inaan muujiyo in kooxo tayo hooseeya ama boggag spam ah ay ku xirnaayeen "blogging martida" sida istiraatiijiyaddooda isku-xirnaanta dhismaha, waxaanan aragnaa iskudayo badan oo spammy ah oo lagu sameeyo baloogga martida. Sababtaas awgeed, waxaan kugula talin lahaa shaki (ama ugu yaraan taxaddar) marka qof gaaro oo ku siiyo maqaal blog martida ah.
Waxaan dhawaanahay baxay marti blogger halkan on Martech Zone. Qoraagu waxay noo timid iyada oo sheegaysa inay rabto inay soo gaadho waxyaabo badan oo ku saabsan warshadaha suuq-geynta waxayna rajeyneysaa inay qormooyin qoto dheer noo soo qorto. Waxaan siinnay marinkeeda waxayna qortay boostadii ugu horreysay.
Waan shakiyay. Boostada waxaa ku xirnaa xiriiro fara badan oo ka kooban waxyaabaha ku jira… in yar ayaa si guud loo wada yaqaan laakiin mid ayaa aad u qeexan waana ka walaacsanahay. Waxaan horey u codsaneynay xiriirinno nofollow oo ah waxyaabaha ka baxa dibadda, laakiin wali waan ruxin kari waayey xaqiiqda ah inaysan ahayn mid si aad ah loo bartilmaameedsaday links oo leh xiriiro aad loo bartilmaameedsaday. Laba maqaal oo dheeri ah oo ka socda qoraaga iyo aniga waxay ahayd inaan bilaabo inaan baaritaan ku sameeyo.
Waxaan dib u eegay astaanteeda Twitter, Facebook profile, Google+ profile iyo maqaallo kale oo ku baahsan webka. Mid waliba si cadaalad ah buu u yaraa… ma jirin wada sheekeysi shaqsiyadeed, saaxiibo maleh, iyo xoogaa su'aal ah halka ay ka timid ama xitaa hada ku nooshahay. Waxay u muuqataa inay tahay dabeecad khiyaali ah inkasta oo ay maqaallada ka soo ururiso qadka internetka. Dabcan, xitaa ma hubo inay iyadu tahay magaca saxda ah.
Cawska ugu dambeeya wuxuu ahaa inaan ka codsaday koobi ruqsadda darawalnimada. Waxay qortay oo sheegtay inaysan ku qanacsaneyn bixinta macluumaadka badan ee gaarka ah. Marnaba ma weydiisan macluumaadka gaarka ah… waxay dabooli lahayd cinwaankeeda gurigeeda iyo wixii macluumaad shakhsi ah. Waxaan si fudud u doonayay cadeynta aqoonsiga. Intaas markaan ku idhi, waxaan ka saaray dhamaan xiriiriyeyaasheeda fariimaheeda waxaanan badalay aqoonsiyadeeda soo galida.
Marka… halkan ka dib, halkan waa liistadayda hubinta:
Aqoonsi rasmi ah - balooggan ayaa ah awooddayda khadka tooska ah waxaanan u baahanahay inaan sii wado soo-gaadhista, ixtiraamka iyo tayada si aan u ilaaliyo oo aan u sii koriyo kuwa soo socda. Uma baqayo in aan halis ugu galo gadaal gadaal gadaal.
Shuruudaha Isticmaalka - waxaan hubineynaa in qorayaasheena dhammaantood ay ogyihiin waxa yoolkeenu yahay - in aan siino suuqleyda aragti ku saabsan sida aaladaha iyo teknolojiyaddu ay saameyn ugu yeelan karaan dadaalkooda suuq-geynta. Maaha in la iibiyo ama gadaal gadaal laga dhigo! Wixii kale ee ka koobnaana waa laga saarayaa qoraaga waa la masaafurinayaa.
Doorka wax ku biiriyaha - dhamaan qorayaasheena waxay kubilaabi doonaan iyagoo noqda kuwa wax ku biiriya… macnaheedu waa inay qori karaan waxyaabaha laakiin iskood iskama daabici karaan. Waan dib u eegi doonnaa oo daabici doonnaa qoraalladooda illaa aan ka raalli noqonno inay fahmaan waxay samaynayaan.
Xayiraadda oo dhan - haddii uu jiro xiriir lacag bixin ah oo innaga dhexeeya, qoraha qoraaga, iyo ilaha lagu bixiyay boostada dhexdeeda - cilaaqaadkaas ayaa loo shaacin doonaa akhristaha. Wax dhib ah kuma qabno bixinta waxyaabaha ku saabsan kafaala qaadayaashayada ama alaabteena iyo adeegyadeena aan xulafada nahay… laakiin dhagaystayaasheena waa inay ogaadaan inuu jiro xiriir halkaas ka socda.
Nofollow - dhammaan xiriiriyeyaasha waxaa laga daawan doonaa qoraallada martida. Wax reeban maahan. Hadafkaagu waa inuu noqdaa inaad gaarto oo aad lahesho dhagaystayaasheena ballaadhan iyo kuwa soo socda - oo aan dib u laaban SEO. Ahmiyadeena si toosan ha loo ilaaliyo.
Sawirro La Xaqiijiyay - wixii muuqaal ah ee muuqaal ah waa la shatiin doonaa. Haddii blogger-keena martida ahi aanu lahayn ilo, waanu isticmaali doonaa kuwayaga kaydka sawir iyo fiidiyow. Ma helayo biil baad ah oo ka socda adeegga sawir kaydka ah sababta oo ah baloog marti ku ah ayaa sawir ka soo qaaday raadinta sawirka Google.
Mawduuc Gaar ah - kama koobno ​​waxyaabaha ay ka kooban yihiin ilo kale. Wax kasta oo aan qorno waa kuwo gaar ah. Xitaa markaan wadaagno faahfaahinta, waxaa la socda maqaal u gaar ah dhagaystayaasheena.
Maxay yihiin talaabooyinka kale ee aad qaadeyso si aad u hubiso in barnaamijkaaga martigelinta ee martida loo yahay ee ku yaal balooggaagu ay caawinayaan oo aysan ku dhaawaceynin sumcaddaada internetka iyo awoodda aad ku leedahay raadinta iyo bulshada?
Tags: istaraatijiyad gadaal ahbacklinksbeen abuur ahblogger martida ahSEO
Mar 26, 2014 at 3: 10 AM
Shaqo weyn Douglas, waa qoraal weyn oo dabiici ah oo ku saabsan waxa ay qorayaashani ku sameeyaan baloogga martida. Ma aqaano sababta aadan diiradda u saarin tilmaamahan kahor intaanad bixin inaad ku qorto boostada martida bartaada. Dhamaanteen waan ognahay in tilmaamahani ay qasab yihiin dhamaanteenna waxaan ubaahanahay inaan raacno kahor intaanan qofna u oggolaan inuu ku qoro baloog marti ah bartaada.